Global Voices teny Malagasy » Mampiseho ny Lafiny Maha Olona ny Fivarotantenan’ny Lehilahy Ao Japana Ny Horonantsary Fanadihadiana Iray Vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Septambra 2017 21:18 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Mampiala voly an'ireo mety ho mpanjifa ao anatinà bara urisen. Sary an'ny ‘Boys for Sale .’
Resahina anatin'ny horonantsary fanadihadiana vaovao, “Boys For Sale “, ny fivarotantenan'ny lehilahy, antsoina amin'ny teny Japoney hoe “urisen” (ウリ専 ) any amin'ny tanànan'i Shinjuku “2-chome” , ivontoerana lehibe indrindra ao Tokyo ho an'ny kolontsaina pelaka sy ny fiainana amin'ny alina.
Maro tamin'ireo tovolahy nitafatafàna tanatin'ilay horonantsary no nilaza fa niroboka tanatin'io asa io noho ny filàna vola hanampiana hanefàna ireo trosam-pianakaviana, na koa noho ny fandosiran'izy ireo tao Tokyo hitady asa kanefa tsy nahita asa hafa hatao. Nisy iray tamin'izy ireo nilaza fa nankao Tokyo taorian'ilay tsunami tamin'ny 2011 izay nandrava ny tanàna nahabe azy tany amin'ny Fileovan'i Iwate. Amin'ny ankapobeny, tsy voarara ny fivarotantenan'ny lehilahy any Japana, satria araka ny lalàna dia ny fampiasana fivaviana mandritra ny firaisana ihany no atao hoe firaisana ara-nofo , noho izany dia tsy mandika lalàna ireo hetsika firaisana hafa rehetra andoavam-bola.
Pejinà vohikala mampiseho ny fisafidianana ireo lehilahy mpivarotena anatinà bara iray ao Japana. Sary an'ny ‘Boys for Sale .’
Notanterahinà ekipa iraisam-pirenena ahitàna mpamorona horonantsary avy ao Etazonia sy avy ao amin'ny Fanjakana Mitambatra ary avy ao Japàna ny “Boys for Sale”. Zava-dehibe ny fanorenana fahatokisana miaraka amin'ireo olona nanaovana fanadihadiana, hoy i Ian Thomas Ash , mpamokatra mpanatanteraka , tamin'ny Tokyo Weekender. Nandany taona iray manontolo ireo mpamorona horonantsary andehanana anatin'ireo bara urisen samy hafa tao Shinjuku, nifankalalàna tamin'ny vondrom-piarahamonina. “[N]anjazy nahafantatra anay ny olona ary takatr'izy ireo fa tsy fanaovangazety kitoatoa fotsiny ihany ity,” hoy  izy.
Nalefa voalohany nandritranà fetiben'ny horonantsary tany Alemaina ity horonantsary fahadihadiana ity tamin'ny Mey 2017, ary haseho anatinà fetibe misesy manerana izao tontolo izao, isan'izany ny Durban Gay and Lesbian Film Festival  2017, natao ny 26 Aogositra ka hatramin'ny 1 Septambra 2017. Afaka jerena eto  ny fandaharampotoan'ny fandefasana io horonantsary io amin'ny fararanon'ity 2017 ity, ary antenaina hambara tsy ho ela ny fandefasana azy voalohany ao Japana.
Afaka jerenao eto ny sombin'ny “Boys for Sale “:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/06/105978/
 tanànan'i Shinjuku “2-chome”: https://www.travelgayasia.com/tokyo-gay-bars/
 fampiasana fivaviana mandritra ny firaisana ihany no atao hoe firaisana ara-nofo: https://www.japantimes.co.jp/news/2008/05/27/reference/law-bends-over-backward-to-allow-fuzoku/#.WZb_rlUjG00
 mpamokatra mpanatanteraka: http://www.documentingian.com/films/
 Durban Gay and Lesbian Film Festival: http://dglff.org.za/